UKhaled Drareni: ukuqiniseka kwentatheli kuvusa ulaka e-Algeria! - ITELE RELAY
InternationalUKUHLOLA OKUPHUMA AFRIKACOMPANY
By ALEXIS WAYAN Kugcine ukubuyekezwa Agasti 11, 2020
E-Algeria, ulaka ngemuva kokugwetshwa kwentatheli uK Khaled Drareni
Umbuso wase-Algeria uthatha ithuba le-Covid-19 ukuguqula ukucindezelwa kwezibalo ezivela kwaHirak, umbutho wokubhikisha ngamandla.
NguKarim Amrouche Kuthunyelwe namhlanje ku-10h50, ibuyekezwe ku-10h51
Inkantolo ephakeme yaseSpain ivimbela umholi waseCatalan ...
Izimpi ezishubile zigcwele eNagorno-Karabakh
“RIP, ubulungiswa bezwe lami! Ngifisa sengathi ngabe ngazi wena ufile [kunalokho] kunokuba ngikubone uswele amandla, ugwala, ungafanele ... " Ukukhala kwentatheli kanye nomlobi uMustapha Benfodil kubuye, ngoMsombuluko, ngo-Agasti 10, intukuthelo ekhonjiswe ezinkundleni zokuxhumana e-Algeria, ekumemezeleni, ngalo lolo suku, lokulahlwa yicala lentatheli u-Khaled Drareni iminyaka emithathu ijele lepulazi.
Abameli babalesi sigameko babengenakho ukukhohlisa mayelana nokuthi kungenzeka icala likhululiwe. Kepha babemangazwe ubulukhuni besinqumo. Ukuvusa a "Ifolda engenalutho", bakhuza a "Ukudikibala okubalulekile" ngokumelene nentatheli, exhumene nokuhlanganiswa kwakhe kweHirak, inhlangano yokubhikisha emelene namandla, ekuqaleni kwemibhikisho emikhulu e-Algeria, kusukela ngoFebhuwari 2019.
Funda futhi Intatheli yase-Algeria uKhaled Drareni ugwetshwe iminyaka emithathu ejele
Ngokusho kwezihlobo, uMnuz Khaled Drareni ubizwe okungenani kathathu ngabophiko lwezokuphepha lwangaphakathi, ngesikhathi eyalwa ukuthi ayeke ukumboza lo mbhikisho. Ukubambiswa udonga. Intatheli eneminyaka engama-40 ubudala isiza lesi siza ICasbah Tribune, usingatha i- “Café presse politique”, uhlelo oludumile kuRadio-M, olusakazwa ku-inthanethi, futhi lusebenza nesiteshi saseFrance i-TV5. Ungumbhali futhi weStudioors Ngaphandle Kwemingcele futhi, kulesisikhundla, usebenze kakhulu ekuvikeleni izintatheli.
“Umenzeli” ovela phesheya
Uboshwe ngoMashi 7, 2020, ngesikhathi ebopha umbhikisho, umshushisi uKhled Drareni, kanye nezishoshovu uSamir Belarbi noSlimane Hamitouche (impi eyalandela ngenhloso yokulahleka “kweshumi leminyaka elimnyama”; 1990s) "ngokuvuselela umbuthano ongenazo izikhali "kanye" nokuhlaselwa kobuqotho bendawo kazwelonke ". Amacala aqhamuka cishe kuzo zonke izinsolo zokushushiswa kwezibalo zakwaHirak eziqale kabusha izishoshovu zazo ngenkani ngemuva kokuphela kwemibhikisho maphakathi noMashi, ngenxa yeCovid-19.
Kummeli uZoubida Assoul, isinqumo "ngukuhunyushwa kwesimemezelo senhloko yezwe"
Imvelaphi yakhe ebekwe ngaphansi kokwehlulela, uK Khaled Drareni waboshwa ngoMashi 28. NgoJulayi 2, uSlimane Hamitouche noSamir Belarbi bakhululwa okwesikhashana. Kugwetshwe u-Agasti 10 kuya eminyakeni emibili ejele, ezine zivaliwe, kepha sebeseqedile isigwebo sabo, bahlala mahhala. Ngamacala afanayo, uK Khaled Drareni ugwetshwe iminyaka emithathu ejele. "Yintatheli lowo okubhekiswe kuye", kusho ozakwabo.
UKhaled Drareni ubengundabamlonyeni womkhankaso we-smear ezinkundleni zokuxhumana umethula njengo "Umenzeli" abavela phesheya, naseFrance ikakhulukazi. Edumele, uyise, uSid Ahmed Drareni, isazi seMpi Yezkululeko, wakhipha incwadi evulelekile eya kuMongameli, u-Abdelmadjid Tebboune, eveza iqiniso lokuthi ukungabi nabulungiswa kuhlupheka nguK Khaled "Sihambisana nomkhankaso onobunzima wokungabaza ukuthanda izwe".
I-missive engazange ivimbele, emavikini ambalwa kamuva, inhloko yombuso yase-Algeria isuke imangalela, ngaphandle kokuqamba yena ngqo, uKhaled Drareni wase "Ubuhlakani be-Quasi namaqembu aphesheya". Kubameli bakaZoubida Assoul, imantshi yangaphambili, isinqumo esilethwe ngoMsombuluko siyiso "Ukuhunyushwa kwesimemezelo seNhloko Yezwe". "Sizizwe sisolwa kanye nemibuzo kamengameli, wanezela. Kulahlwa yipolitiki kanye nesinqumo sepolitiki. " Isicelo esisayinwe yizintatheli eziningi, izishoshovu nezakhamizi siyasigxeka "Ukwelashwa okukhethekile" ugcinelwe intatheli.
Funda futhi IFrance-Algeria: "Izingobo zomlando zamakholoni ziyingxenye yamagugu afanayo"
Selokhu kuphele imibhikisho maphakathi no-Mashi, abaphathi be-Algeria bathinte ukucindezelwa kwamabutho kaHirak. Iphrojekthi yakhe yokuvuselela uMthethosisekelo ayivusi intshiseko, abaphikisi bakholelwa ukuthi ayishintshi indlela yombuso esimweni esikhulayo somnotho nakwezenhlalo. Amandla ancishisiwe ukukhuphuka "Izinyathelo zabantu nokucindezelwa", kubhala uHosni Kitouni, umcwaningi emlandweni, ekhasini lakhe le-Facebook, ngengozi yokuthi lokhu kuzoholela "Izinhlobo ezingalawuleki ngokuphelele zokulungiswa kabusha". umthombo
ALEXIS WAYAN 160 izikhala 0 amazwana
ECameroon: Ilungu lePCRN, uRolande Ngo Issi, ufungisiwe eMkhandlwini Wokuphakama Kwabaphathi
ULaurence Boccolini ushiya i-TF1!
Inkantolo ephakeme yaseSpain ivimbela umholi waseCatalan esikhundleni